IKhabhinethi Yamandla Wekhwalithi, Imodyuli yekhwalithi yamandla, Umgcini Wamandla - uHengyi
I-Hengyi Electric Group yasungulwa ngo-1993, inenhlokodolobha ebhalisiwe engama-yuan ayizigidi ezingama-58, ekhethekile ekukhiqizeni i-APF, i-SVG, i-SPC, amadivayisi anxephezela amandla we-capacitor, ama-anti-harmonic amadivayisi wokunxephezela ama-capacitor, ama-capacitors aphezulu nalawo aphansi, namandla asebenzayo ukunxeshezelwa okuzenzakalelayo abalawuli. Izisekelo ezimbili ezinkulu zokukhiqiza zitholakala eWenzhou naseShanghai. Mboza indawo engamamitha-skwele angama-20,000 namamitha-skwele angama-25,000, futhi wakhiqiza izigidi zemikhiqizo yekhwalithi yamandla minyaka yonke.
Sizibophezele ekuphathweni kwekhwalithi kagesi ukuqinisekisa ukudluliswa kwamandla okuphephile futhi okusebenzayo
Imishini yokulwa nomlilo, ukukhanyisa, abendlu
Nciphisa ukushisa kwemishini kagesi, unciphise ukuguga, ukwenze ngcono impilo yensizakalo futhi wehlise nezindleko zokuyigcina.
Ezimboni nezimayini, amachweba
Uhlelo lokuphathwa kwekhwalithi yamandla lungathuthukisa ngempumelelo ikhwalithi yokuphakelwa kwamandla kwezinto zokusebenza zebhizinisi futhi linciphise ukulahleka kwezomnotho okubangelwa ukungazinzi kwemishini.
Kunganciphisa amathuba okuzwakala kwesinxephezelo ku-grid yamandla futhi ithuthukise ukuphepha kokusetshenziswa kwamandla.
Isikhathi sangempela sokutholwa komthwalo wamanje ukugwema imishini ye-alamu yamanga ebangelwa ukungalingani kwamandla kagesi.
Dynamic esibanzi ...
Ukubuka konke module ye-APF / SVG + HYBAGK anti-harmonic capacitor (isethi ehlanganisiwe). Imodyuli ye-APF noma ye-SVG ifakiwe kwikhabethe futhi ifakwe ama-breaker wesifunda angenayo ne-fuse esheshayo Amandla we-HYBAGK capacitor module yinoma iyiphi inhlanganisela ye-5kvar ~ 60kvar; amandla we-APF noma imodyuli ye-SVG ingu-50A (35kvar), 100A (70kvar), 100kvar uyazikhethela. Idizayini yokungenisa umoya ngemuva, enezimbobo zokuhlunga zomoya. Ukushintshwa kwe-Capacitor kulawulwa yi-APF / SVG, ehlakaniphe kakhulu. I-advan ...
HYAPF amandla asebenzayo fil ...
Ukubuka konke i-HYAPF / HYSVG ithola umthwalo wamanje ngesikhathi sangempela ngokusebenzisa isiguquli sangaphandle samanje (i-CT), ibala ingxenye ye-harmonic / esebenzayo yomthwalo wamanje nge-DSP yangaphakathi, bese iyithumela ku-IGBT yangaphakathi ngesiginali ye-PWM, bese ikhiqiza isinxephezelo yamanje ene-amplitude efanayo kodwa ama-engeli wesigaba esiphikisanayo kuma-harmoniki atholakalayo / amandla asebenzayo ukufeza umsebenzi wokuhlunga / wokunxephezela. ● Isinxephezelo seHarmonic: I-APF ingahlunga izikhathi ezingama-2 ~ 50 ngokungahleliwe ...
Umthwalo wezigaba ezintathu ze-HYSPC ...
Uhlolojikelele Ukungalingani kwezigaba ezintathu kuvamile kumanethiwekhi wokusabalalisa amandla aphansi. Ngenxa yokuba khona kwenqwaba yemithwalo yesigaba esisodwa kumanethiwekhi asezindaweni zasemadolobheni nasemaphandleni, ukungalingani kwamanje phakathi kwalezi zigaba ezintathu kubi kakhulu. Ukungalingani kwamanje kugridi yamandla kuzokhulisa ukulahleka kolayini ne-transformer, kunciphise ukuphuma kwe-transformer, kuthinte ukuphepha kokusebenza kwe-transformer, futhi kubangele ukukhukhuleka okungu-zero, okuholele ekungalinganisweni kwamandla wezigaba ezintathu, nokuphinda ...
Sibutsetelo isihlungi samandla esisebenzayo se-HYAPF sithola ...
HYSVG + C po Intelligent ...
Ukubuka konke Lo mkhiqizo unemisebenzi ye ...
Intelligent amandla qual ...
Uchungechunge lwe-HY luhlakaniphile ...
Sibutsetelo HY uchungechunge ezihlakaniphile kuhlangene i ...
Sibutsetelo HYCAHB Intelligent low integrated integrated ...
Sibutsetelo Hengyi ohlakaniphile kuhlangene v ongaphakeme ...
Abathengisi baseHengyi bahlangana ndawonye ukukhuluma ngamathuba amasha
Umhlangano kaHengyi wokuthengisa wasekhaya maphakathi nesifinyeto wonyaka wabanjwa ngempumelelo Kusukela ngoJulayi 31 kuya ku-Agasti 1, umhlangano wezinsuku ezimbili wokufingqwa kweHengyi Electric Group's ...
Igatsha lephathi leHengyi Electric Group, ingqikithi yemicimbi yosuku lwephathi lohambo luka- "Julayi Red" ngo-2020
NgoJulayi 1, 2020 yisikhumbuzo seminyaka engama-99 sokusungulwa kweQembu lamaKhomanisi laseChina. Ukuze uzuze ifa futhi uqhubekele phambili ngamasiko amahle eqembu kanye ne ...